Fitaka, Hosoka, Diso, Namboarina: Fitadiavana ny Voambolana Ho An’ny Marina Amin’ny Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2017 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, عربي, বাংলা, English, Română , Deutsch, English
Nahasintona fijery maro tato ho ato ny “Vaovao Tsy Marina”, indrindra fa nasehon'ireo zava-nitranga faramparany fa mety hampisy vokany mafy sy manerana ny tany ireo. Nivadika ho tena izy tokoa ny fahafahany mahatonga herisetra tamin'ny voalohandohan'ny taona: eritrereto ny fandrahonana nokleary tamin'ny faran'ny volana Desambra ny amin'ny fahavononan'ny minisitry ny fiarovana Pakistane, Khawaja Mohammad Asif, nalefany tamin'i Israely nifototra tamin'ny tati-baovao nodisoina mikasika ireo eritreritra Israeliana. Ao Etazonia, lasa fomba fametahana marika amin'ireo mpitatitra voavao izay hita ho mitsikera an'i Donald Trump ny ‘vaovao tsy marina’, anefa hita ihany koa mety ho fanazavana ny fiakarany teo amin'ny fitondràna.
Tsy ireo vaovao diso ihany no hany olana, araka ny notsipihan’ny olona toa an'i Melissa Zimdars (profesora izay nalaza tokoa ny lisitra nataony ahitàna ireo vaovao tsy marina, taorian'ireo fifidianana Amerikana). Marina tokoa, hita ho mihanaka be ireo tranganà fampielezankevitra, fanovàna loharanom-baovao, fandisoana vaovao, fanjonoana, ary “ny marina araa izay mahametimety ny mpilaza“, ary angamba amin'ireo tranga sasany aza, tena mbola manimba kokoa (araka ny nambaran'i Gilad Lotan vao haingana).
Ny tena marina, sarotra be ny hamantarana mazava ny “vaovao tsy marina”. Tsy ampy ho an'ny tantara iray ny hoe misy tranga diso — efa diso tamin'izany taloha ireo mpanao gazety — ary tsy mampiditra ireo tranganà hosoka mazava ataon'ireo mpanao gazety. Nifamatotra akaiky kokoa tamin'ny votoaty namboamboarina mba hampidi-bola ny fampiasàna ireo vaovao tsy marina, taloha. Ankehitriny, mety mirakitra karazana vaovao maro azo ifandaharana io teny io, ary tafiditra amin'izany ny sasany amin'ireo tranga manahirana resahana etsy ambony. Misy dikany farafahakeliny iray io teny io, farafahakeliny amin'ny fiteny Anglisy amin'ny sehatry ny media. Mampibaribary ny olana ny fiezahana mandika io teny io amin'ny fiteny hafa: raiso ohatra ny teny Japoney, izay デマ na “dema” no afaka midika hoe “vaovao tsy marina” kanefa ihany koa hoe “tsaho diso – honohono“.
Ny zavatra voarakitry ny “vaovao tsy marina” dia ny fahasahiranan'ireo mpamaky amin'ny filazàna ny fahasamihafàna'ny zavatra marina sy diso amin'ny tati-baovao. Nisy fanadihadiana nataon'ny Anjerimanontolon'i Stanford tain'ny taona lasa, taminà mpianatra mihoatra ny 7.800, nampiseho fa ny ankamaroan'ireo Ameriana mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ,ohatra, manaiky tsotra ireo sary sy ireo maribolana ho “tena misy,” kanefa tsy mieritreritra ny hanamarina izany akory. Ary ilay sary natao fanandramana?
Midika izany hoe manao ny asa sarotra amin'ny fiezahana ny hitady ny teny marina hilazàna ireo olana sy zava-mitranga. Ny volana Desambra, nanomboka tamin'ny hoe tsy marina izahay, fa niova tamin'ny fampiasàna ny teny toy ny hoe diso ary hosoka, izy roa ireo izay nanahirana anay ny fanombohany nitondra ny fiantraikan'ny tian'ny mpanoratra ambara ary ny resaka heloka bevava. Amin'izao, manandrana miova amin'ny teny hoe vaovao namboamboarina indray izahay, izay afaka vakianao bebe kokoa ny momba azy ao amin'ity pejy ity. Mieritreritra izahay fa asa eo andalam-pivoarana io, iray izay manao ho zava-dehibe tokoa ny ezak'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ato aminay, izay manangona ireo karazana vaovao mampisy olana amin'ny fiteny rehetra.